Gudoomiyaha Olympica ga Somaliland Xasan Waraabacade oo si rasmi ah Isku casiley | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on September 23, 2015 by sdwo · No Comments
Hadalhayanta ilaa shalay laga hadal hayey magaaalada Hargeysa inuu is casilayo Gudoomiyahii Ciyaaraha Olympic ga Somaliland Xasan Waraabacade ayaa shaaca ka qaaday inuu iskacasiley xilkii gudoomiyinimada. Haldoor Xasan Waraabacade ayaa noo xaqiijiyey mar aan maanta xidhiidh la samaynay inuu is casilaadiisa uu qoraal ugu gudbiyey Wasiirak Ciyaaraha, kana rajaynayo inuu si wanaagsan uga aqbalidoono iscasilaadiisa. Waxanu yidhi:
Waxaan si buuxda iskaga casilay Gudoomiyanimada Olymbiga shalay oo taariikhdu ahaayd 22.9.2015. Waxaan cadeeynayaa in aan dhalinyaradda sidaaydii hore ee aan ugu adeegi jiray si mutadawacnimo ah aan ugu adeego wax kastana aan la qabto kamana caajisaayo maadaama aan u soo adeegay 21 sanadood. Waxaan u rajeeynayaa in qarankeenu uu maalin maalmaha ka mida ahmiyadda koobaad siin doono dhalinyaradda iyo cayaaraha
Haldoor Xasan ayaan ilaa hada wax faahfaahin ah ka bixinin waxa keenay is casilaadisa xili ay fooda inagu soo hayaan tartankii ciyaaraha gobolada oo dhawr jeer dib u dhacay lana filayo inay qabsoomaan bisha October ee sanadkan. Xasan ayaa saxaafada u balanqaaday inuu si faahfaahsan uga hadlidoono waxyaabaha ku sii cadaadiyey inuu xiligan ka dhexbaxo wasaaradii Ciyaaraha. Xasan Waraabacade ayaa wax badan ka qabtay si mutadawacnimo ah tan iyo intii dalka dib loogu soo laabtay isagoo dhalinyarada ka caawin jiray dhinaca dharka iyo kabaha ciyaaraha iyo kubadahaba. Xasan waxa lagu xasuusandoonaa horumarka uu gaadhsiiyey ciayaaraha Somaliland isaga oo ay taariikhada u gashay inuu yahay ninkii u horeeyey ee ka fakira inuu garoonada kubada ee kaarbetka la dhilgo uu ka hirgeliyey magaalada Hargeysa, taasi oo sababtay in dad badani ay kaga deydaan fikradii cusubayd ee uu dalka ku soo kordhiyey, isagoo dadkana u fududeeyay inuu ka caawiyo habka loo dhigo kaarbadka iyo soo iibintiisaba. Magaalada Hargeysa ayaa mudo sanad iyo badh gudahood ah ku yeelatay in ka badan 30 garoon oo kuwa karbatku yaalaan ah. Fikirkan ayaa ku sii fiday Somaliland inteedii kale iyadoo laga hirgeliyey garoono noocan oo kale ah Burco, Berbera, Gebiley iyo Borama. Aakhirkiina fikirkii xasan wuxuu sababay in xukuumaduna ku dhiirato oo ay doogii karbatka ah ay dhigto garoonka weyn ee kubada Cagta ee Hargeysa oo bil ka hor la dhameeyay.